Triple Promotion နဲ့ ဝယ်ယူခွင့်ရမယ့် Kabaraye Executive Residence
► ပြပွဲအတွင်း ပထမဆုံး ဝယ်သူ (၃) ဦးကို Triple Promotion အနေနဲ့ အခန်းတန်ဖိုးရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် Discount ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
► ပထမဆုံး ပရိုမိုးရှင်းကို မမှီလိုက်တဲ့ Customer (၃)ဦး အတွက် တစ်နှစ် Free Maintaince Charges Discount
► ပထမ နဲ့ဒုတိယ ပရိုမိုးရှင်းကို မမှီလိုက်တဲ့ customer (၃) ဦးအတွက် (၆)လ Free Maintaince Charges ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Luxury life style ကို ပုံဖော်ချင်သူတိုင်း
Kabaraye Executive Residence အဆင့်မြင့်ကွန်ဒို
KER Residence မြေအမျိုးအစား
KER Residence အကျယ်အ၀န်း
► (၂၄၄၈၀) စတုရန်းပေ
KER Residence Complex
► 29 stories +3stories of Basement, 115 units of Residential
KER Residence ကားပါကင်
► ၆လွှာနှင့် ၇လွှာတွင် ကားပါကင် ၂၄၅စီး ရပ်နားနိုင်သည်
KER Residence အခန်းအမျိုးအစားနှင့် အကျယ်အ၀န်း
► 8 to 19 Floor : 96 units of 8 types
Type A to Type H
• 1662.8 sq ft
• 1272.29 sq ft
• 1873.46 sq ft
• 1813.5 sq ft
• 1932.66 sq ft
• 1900.37 sq ft
• 1637.94 sq ft
• 2107.57 sq ft
►22 to 26 Floor : 96 units of 8 types
Type I to M
15 units of5types
Type I (Duplex)
• 4308.25 sq ft.
Type J (Penthouse)
• 3026.81 sq ft.
Type K (Penthouse)
• 4024.63 sq ft.
Type L (Duplex)
• 3220.02 sq ft.
Type M (Penthouse)
• 4164.56 sq ft.
KER Residence Facilities
► Infinity Swimming Pool
► WATV System
► 24 Hours Security Guards
► Fully Fire Protection System
► Card System Lift (6Lifts )
► Emergency Staircases
KER Residence ကဘာတွေနဲ့နီးလဲ ?
► လေဆိပ် (၁၅) မိနစ်
► Sedona Hotel (၃) မိနစ်
► ISY international School (၂၀) မိနစ်
► ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (၁၅) မိနစ်
► ဥက္ကလာ ဂေါက်ကွင်း ( ၅) မိနစ်
► KBZ ဘဏ် (၂) မိနစ်
► Parami Hospital
► American Embassy
► Korea Embassy
Filename: v3/expo_crm_many_view.php(497) : eval()'d code